Umkhiqizi we-China T-bolt Clamp kanye namaFekthri | IGlorex
I-T-bolt clamp iwuhlobo lwe-clamp esetshenziselwa ukuqiniswa kweshubhu ye-silicone. Ama-bandwidth akhona manje esinawo yi: 19, 20, 26, 32, 38.
Ama-T-bolt clamp anikezela ngokufakwa uphawu okuthembekile nokuthembekile ngomfutho ofanayo wokuqina kokuqina nokuqina okuqinile.
Ukuhlanganiswa okujwayelekile kuyisikhwama sepulasitiki, futhi ibhokisi elingaphandle liyibhokisi.Kukhona ilebula ebhokisini.I-packet ethile (ibhokisi elimhlophe elicwengekile, ibhokisi le-kraft, ibhokisi lombala, ibhokisi lepulasitiki, njll.)
I-T-bolt clamp isetshenziswa kabanzi ekusebenzeni okuphezulu kokudlidliza nokusebenzisa umbuthano omkhulu njengeloli esindayo, imboni, izimoto, ukunisela ngezolimo nemishini.
Ama-T-bolt clamp asebenzisa izakhiwo ezahlukahlukene nezinqubo zokukhiqiza ukuze ahlangabezane nezidingo zezinhlobo ezahlukahlukene zama-hoses namapayipi wensimbi. Banamandla aphezulu aphelele, ukusetshenziswa okulula namandla okuqinisa okuqinile.
Esedlule: I-hose clamp
Olandelayo: Unampiko we-hose non-polar we-non-polar